ဒီဟယ်လိုဝင်းတစ် ဦး HOOK နေဖို့ဘယ်လို - နှုန်းထားများ
ဒီဟယ်လိုဝင်းတစ် ဦး Hook နေဖို့ဘယ်လို
သငျသညျသတိထားမိကြလိမ့်မည်အဖြစ်, ငါတို့နောက်ထပ်အေးစက်နေတဲ့မြည်း, ဆိုင်းရာကူစ့်အောက်တိုဘာလအလယ်၌ငါတို့ကိုတွေ့ပြီ။ ဟုတ်တယ်၊ အရွက်တွေပြောင်းနေတယ်။ ဒေါ်လာ ၄.၄၅ ပါတဲ့အခြေခံခွေးတိုင်းဟာရွှေဖရုံသီးအမွှေးနံ့သာ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ ၀ င်မှု) ကြောင့်စိတ်ထဲပျောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာ Orange Nation မှာတွေ့ရမှာပါ အအေး ။
နွေရာသီအပူကိုသင်တိုင်တန်းတိုင်းမင်းကိုနောင်တရစေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လေရဟတ်ဥမင်တစ်ခုကြောင့်ငါတို့အားလုံးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ငါတို့အားလုံးဟာ Shorts in That One Bro ကိုအရမ်းအံ့သြတကြီးနဲ့လုံးလုံးရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ( Tyler ကိုနားထောင်ပါ၊ ဘယ်သူမှဒူးထောက်တာကိုမပေးပါဘူး။ အေးမြတဲ့အရာကိုမင်းသိလား Hypothermia ။ ) အခြားသူများအားလုံးအပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားစည်းလုံးစေသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိသေးသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရမီးခိုးထွက်ခြင်းနှင့်ဝတ်စုံများကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟယ်လို။
ငါအချစ်ဟယ်လို fuck ဆိုတဲ့ အိမ်ကိုအနက်ရောင်နို့သီးခေါင်းတစ်ထည်၊ ကြောင်နားရွက်အချို့နှင့်အပြင်ကိုထွက်ခွာရန်လက်ခံသည့်နှစ်၏တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်ဟယ်လိုဝိန်းမင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကျဆင်းသွားသည်။ ငါနှစ်ပတ်အတွင်းခုနစ်ကြိမ်မီးပျက်သွားတယ် ... နှင့် ) သင် Sprint တော့မည့်မာရသွန်အကြောင်းကိုပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်များချရမည်။
ဒါကြောင့်ငါဝင်ဘယ်မှာဒါ - ဤနှစ်၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးကာလကိုဖြတ်သန်းသွားကြဖို့ဘယ်လိုငါ့ (spooky) အကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်ကို Self- ရှင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေ, ပေါက်ပြားကိုသောက်လော့။ မင်းက ၀ တ်စုံဝတ်စားဆင်ယင်ရင်တောင်သင်ဟာကုလားအုတ်တစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။
တစ်ချိန်ကပညာရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကဘယ်တော့မှအအေးမိမည်မဟုတ်။ တကယ်တော့ဒါကလိမ်ပြောတာပဲ။ အခုအချိန်မှာ fracket တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသို့မဟုတ်နောက်မှအဆုတ်ရောင်မှသင်၏ဆေးရုံဥပဒေကြမ်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်စေ။
3. ဒါဟာမာရသွန်မဟုတ်ပါဘူး Sprint ပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာနေ့၊ စနေနေ့အပြောင်းအလဲသည်ရယ်စရာမဟုတ်ပါ။ သင်ဤတနင်္ဂနွေကိုဖြတ်သန်းလျှင်သင်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုသင်ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာသတိရပါ၊ ဒါကြောင့်မနက် (၂) နာရီမှာမာရှယ်လမ်းပေါ်ကိုမာရှယ်လမ်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါသင်ဟာမာရသွန်ပြေးပွဲကိုပြေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။ (အကယ်၍ မာရသွန်ပြေးလျှင်မင်းပြေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုယုံတယ်။ )
4. သင်၏ပါတီ tit လွတ်မြောက်ရန်ခွင့်မပြုပါနဲ့။
မင်းတို့အမျိုးသမီးတွေနားထောင်ကြပါစို့၊ သင်ကဒီ Halloweekend ဖြစ်တော့မယ့်ပုံစံမျိုးကဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ titties တွေကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဂျန်နက်ဂျက်ဆင်ကအမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားမှာပြတ်ပြတ်သားသားရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ၊
သငျသညျဤကိုဖတ်ရှုကြပေလိမ့်မည်, သို့သော်သင်၏အိမ်ရှင်မိန်းကလေးရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, ယခုသူမ mozzarella တုတ်အကြောင်းကိုငို acropolis အတွက် blacking- ထွက်ပါတယ်။ သူမ၏ရေကိုပေးပါ၊ အိမ်ကိုယူပါ၊ သူမမနက်ဖြန်အမဲကောင်ကိုသူအဖြစ်နိုးလာသောအခါသူမကသင့်အားကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါဖှယျစပါးရိတ်ရာကာလမျက်နှာဖုံးထဲမှာကြောင်း bro အဘို့အထွက်ကြည့်ပါ။ သူကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်ဝတ်ထားပါတယ်။
သငျသညျဒေါက်ဝတ်ဆင်သွားနေလျှင် 7. ။ သငျသညျသူတို့အား goddamn ဒေါက်ဖိနပ်ပိုကောင်း။
သူတို့ကိုမဝတ်ဖို့သင်အကြံပေးတော့မယ်။ ၀ တ်ရုံ၊ မျက်နှာ၊ မြည်းကိုချိုး။ သေလိမ့်မည်။ ဒေါက်ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်လျှင်သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်မကြားလိုပါ။ မင်းဒါကိုမင်းအပေါ်သို့ရောက်စေခဲ့တယ် မာရှယ်ကိုအော့အန်ခြင်းကနေဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာသင်ဟာ PitaPit ပြင်ပမှာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဘိနပ်မပါသောညည်းညူသံကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်
စိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ သင့်ရဲ့အရက်မူးမြည်းသည် DJ ၏ The spooky ပန်ကာမှ The Cold သို့ရောက်သွားသည်၊ သို့သော်ရုတ်တရက်သင်သည်သင်၏ Netflix ကိုအအေးမိရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ဒီလိုမဖြစ်အောင်သေချာအောင်ငါကြက်သားလက်ချောင်းတစ်ချောင်း (သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သောအစားအစာများသည်အရက်မူးနေသော) ကိုကြိုးတစ်ချောင်းနှင့်နောက်တစ်ညလုံးသယ်ဆောင်ကာကလေး leash လိုမျိုးအရသာရှိသင့်တယ်။
* ရှင်းလင်းချက် - ဤနည်းဗျူဟာသည်မလိုလားအပ်သောအပိုထပ်ဆောင်းလှည့်ကွက်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ သင်သည်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်တူသည့်ဘားသို့ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ယခုတွင်သင်သည် Tim Burton ရုပ်ရှင်မှလူကြမ်းနှင့်တူသည်။ Beetle Juice အသွင်အပြင်သည်ယခုရာသီတွင်မဟုတ်ပါ၊ သင်မျက်နှာကိုရိုက်သည့်အခါသင်လည်းသတ်မှတ်ထားသည်ကိုသေချာစေပါ။
10. သင့်ရဲ့ mom, စိတ်ပျက်မနေပါနဲ့။
ကျေးဇူးပြု၍ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ျာပါးပါး၏ပုံကိုမတော်တဆမတင်ပါနှင့်။ ယုန်တစ်ကောင် ၀ တ်စုံတွင် Uber ၌အော့အန်နေသည့်သင်၏ဗွီဒီယိုသည် barstool ပေါ်သို့တက်သွားသောအခါသူမမျက်နှာပေါ်ရှိပုံကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အတူတူသင့်ရဲ့ shit ထားပါ။ သင့်အမေအတွက်လုပ်ပေးပါ
မင်းရဲ့ဝတ်စုံတွေဆက်ပြီးမင်းရဲ့အရက်ဟာဒီဟယ်လိုဝင်းမှာနေပါစေ။ သငျသညျဘွဲ့ရမှီတိုင်အောင်, သတိရ, က '' အရက်မဟုတ်ပါဘူး။
မင်္ဂလာဆောင်သောဟယ်လိုဝင်း, The Tab ဆိုင်းရာကူစ်းဝန်ထမ်းမှ